Chirungu Grammar Online »Hodges University - Admissions
Categories: Chirungu, Mutauro weChirungu, Hodges Unganidzo, Nhungamiro yepamhepo, Professional Dzidzo uye Kudzidziswa
Kubudirira Nepamhepo Chirungu Grammar Makosi Kubva Hodges Unganidzo!
Welcome to Hodges University's Online Chirungu Grammar Chirongwa, inoteedzana sisitimu yekunzwisisa echirungu magirama mapatani kubva ekutanga kune epamberi hunyanzvi matanho. Yedu yega-inoyerera online chirongwa chakagadzirirwa zvakanangana nevakuru vasiri veChirungu vatauri kuti vanzwisise girama uye vataure Chirungu nechivimbo. Wana hunyanzvi hwaunoda mumazita, zviito, zvidimbu, uye madimikira. Aya hunyanzvi hunogona kukubatsira iwe kuwedzera kugona kwako kushandisa Chirungu zvinobudirira uye nechinangwa uye / kana kuwedzera mikana yekuita mari!
Iyi kosi ndeyevanhu vanoda mukana wekudzidza pamhepo, vanokwanisa kuwana smartphone kana nhare mbozha, pamwe vachinyara kana kunyara kutaura mukirasi kana nharaunda, uye / kana kuda kosi yeChirungu yakagadzirirwa kuburitsa mhando dzepamhepo dzeChirungu zvidzidzo pa mutengo unodhura. Tanga iyo yeChirungu yeChirungu Grammar Course nhasi!
Iyi ndiyo isiri-degree-yekutsvaga kosi inopihwa sechikamu cheiyo Hodges Batanidza Professional Dzidzo uye Yekudzidzisa Chirongwa, apo patinokubatanidza iwe newaunoshandira zvinoda hunyanzvi hwaunoda kuti ubudirire.
Tsvaga ese eChirungu Grammar Makosi
Tsvaga Hodges Batanidza Zvirongwa
Pamhepo Chirungu Grammar Course Ruzivo
Tanga Pakutanga: Chirungu Grammar Online Makosi 1, 2, & 3
Nzwisisa maitiro ekuziva nekushandisa mazita, zvisazitasingwi, zvinyorwa, zvipikisheni, zvivakwa, zvese zviripo nguva yazvino uye nguva yapfuura yaBe. Dzidza maitiro ekuwedzera, kuita mibvunzo, uye kondirakiti yekusimudzira kunzwisisa uye kutaura kwakatsetseka.
Kutanga: $ 299
Chirungu Grammar 1
Chirungu Grammar 2
Chirungu Grammar 3
Bhalisa Kwekutanga Chirungu
Ramba uine Pakati Pakati: Chirungu Grammar Online Makosi 4, 5, & 6
Nzwisisa maitiro ekuziva nekushandisa zvakapusa uye zvinofambira mberi panguva yazvino, yakapfuura, uye yenguva yemberi, enzanisa uye zvikumbiro, uye tsvaga uye upe zano nemvumo. Dzidza maitiro ekubatanidza mitsara uye kushandisa phrasal zviito uye mafomu akabatanidzwa kusimudzira kunzwisisa uye kutaura kwakatsetseka.
Zvepakati: $ 299
Chirungu Grammar 4
Chirungu Grammar 5
Chirungu Grammar 6
Nyoresa Chinyorwa Chemukati
Pedzisa neAdvanced Level: Chirungu Grammar Online Makosi 7, 8, & 9
Nzwisisa maitiro ekuziva nekushandisa ese akareruka, akakwana, uye mafambiro ekufamba, chipikisheni uye mazita ezita, rinoshanda uye risingapfuure izwi, uye fungidziro mamiriro. Dzidza maitiro ekutaura kudiwa, mukana, mukana, uye tariro uye zvishuwo mune zvese nguva uye mune akasiyana mamiriro. Pamusoro pezvo, dzidza nezve rwiyo uye madudziro eChirungu kutaura kuti uwedzere kunzwisisika uye kutaura kwakatsetseka.
Yepamberi: $ 299
Chirungu Grammar 7
Chirungu Grammar 8
Chirungu Grammar 9
Bhalisa Kune Advanced Chirungu
Tora Yepamhepo Kosi Inokudzidzisa Iwe Mashandisiro Ekushandisa Chirungu Mu-Chaiyo-Hupenyu.
Famba zvese zvidzidzo zve9 uchishandisa chero nhare mbozha.
Kosi yega yega inosanganisira Inopindirana Kudzidza, Kuyedza, Kududzira Mazita, uye Maitiro Ekushandisa.
Unlimited muedzo retakes.
Kosi inodzidziswa naDr Leisha Cali, Director weESL, ane anopfuura makore makumi maviri nemasere eruzivo rwemunda achidzidzisa Chirungu.
tenga ese mapfumbamwe eChirungu Grammar Levels ye $ 9 kana kutenga Kutanga, Pakati, uye / kana Yepamberi ye $ 299 imwe neimwe.
Usamirire, Tanga Nhasi!
Saina kumusoro Kumatanho Ese eChirungu Grammar!
Zvizhinji Nezve Dr. Leisha Cali, Director weESL uye Hodges Online Chirongwa
Dr Leisha Cali, Director weESL, anga aine Hodges University kubvira 2004. Ane makore anopfuura makumi maviri nemasere ezviitiko uye anosanganisa kutsvagisa kwake uye neruzivo runoshanda kubva mukudzidzisa vadzidzi Chirungu seMutauro weChipiri mumakore gumi apfuura. iro basa.
Akagadzira iyo yeChirungu Chirungu Grammar kosi yakanangana neavo vangangotadza kushanyira kambasi mune-munhu.
Hezvino izvo zvaunogona kutarisira.
Kuzvipira mamwe mapurogiramu anowanikwa kuburikidza neCanvas uchishandisa chero nhare mbozha.
Grammar makosi akagadzirirwa kukubatsira iwe nzwisisa zvinorehwa neshoko rakataurwa uye rakanyorwa.
Inokubatsira wedzera hunyanzvi hwako kupfuura kupona Chirungu, izvo zvinokanganisa kusangana kwehukama nehukama, pamwe nemikana yemari.
Miedzo inotangira pakusarudza kwakawanda kuzadza-mukati uye inogona kutorwa kazhinji sekuda kunoita mudzidzi.
dzidza yakakwira-frequency mazwi panzvimbo pemashoko akawandisa, achikubvumidza kuti utaure zvinobudirira.
Dzidza nzira dzekukudziridza nekuvaka mazwi mune Anoshanda Ekushandisa mavhidhiyo muchidzidzo chega chega.
Wana zvimwe zvemari yako uine kosi yekukwiridzira, kushushikana, mutinhimira, uye mutinhimira - nzvimbo dzinowanzo regedzerwa muzvirongwa zvetsika nepamhepo..
Muchidimbu, Hodges University yeChirungu Grammar Online chirongwa chakagadzirirwa kuti iwe ugone kunzwisisa mashandiro anoita girama uye kudzidza matauriro nechivimbo!
Majani Lullein, Mutevedzeri weMutungamiriri Anchorage Productions Media
“Chirongwa ichi chakandibatsira kuchinjira kunyika inotaura Chirungu ndiine chivimbo uye zvakanaka. Pasina iyo, ndingadai ndisina kukwanisa kupedzisa dzidzo yangu munyika ino. ”